सुनसरी जिल्लाको सुन्दर पर्यटकीय गन्तब्य ताल तलैया Nepalpatra सुनसरी जिल्लाको सुन्दर पर्यटकीय गन्तब्य ताल तलैया
सुनसरीको सुन्दर पर्यटकीय गन्तब्य ताल तलैया
पृष्ठभूमि : ताल तलैया क्षेत्रलाई २०५५ सालमा ताल तलैयाको नामाकरण गरिएको हो । इटहरी २ र ३ वडामा रहेको तालतलैया सिमसार क्षेत्र अहिले १ नं. प्रदेशकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ ।
ताल तलैजा क्षेत्र इटहरी उपमहानगरको २ र ३ वडामा फैलिएको छ । करीब २० हेक्टरमा फैलिएको ताल तलैयामा ७ वटा तालहरु छन् । प्राकृतिक ताल र प्रकृतिसँग रमाउन मानिसहरु ताल तलैयासम्म पुग्छन् । यहाँको ७ वटा तालमध्ये एउटामा बोटिङको मज्जा लिन सकिन्छ । १ नं. प्रदेशकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने १ नं. प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र इटहरीमा रहेको तालतलैया क्षेत्रलाई प्रदेशकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विस्तार गरिएको छ । तातलैया विकास तथा संरक्षण समितिको मातहतमा रहेको ७६.७५ हेक्टर जमिनमध्ये २१.५० हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्यटन पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेका छन् ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय मूर्तिकारहरुको उपस्थितिमा २८ वटा प्रतिमा निर्माण गरिएको छ । यहाँको प्रतिमालाई वरिपरिबाट हेर्दा छुट्टाछुट्टै आकृति देखिन्छ । जर्मन, जापान, मलेसिया, इजरायल, भारत र नेपालका मूर्तिकारहरुले ढुंगालाई कुँदेर मानिसको मुटुदेखि, आमाको प्रतिमा, माछाको प्रतिमा, त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका कलात्मक प्रतिमाहरुले तालतलैयाको सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएको छ । २८ दिन लगाएर बनाइएको प्रतिमामा धरानको सर्दु जलधार क्षेत्रको ढुंगाको प्रयोग गरिएको छ ।
कुनै समय सिमै–सिमले भरिएको इटहरीको तालतलैया क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । २०५५र०५६ सालतिर इटहरीमा तत्कालीन प्रमुख सर्वध्वोज साँवाको अगुवाइमा तालतलैया क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसवेला सामान्य वृक्षारोपण तथा कटेजहरु निर्माण गर्ने कामबाहेक अरु केही हुन सकेन । त्यो प्रयास द्वन्द्वको समयमा त्यतिकै थाती रहन गयो । २०६२ सालमा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले इटहरीको जुटविकास टोलबाट तालतलैयासम्म पुग्ने मोटरबाटो निर्माण गर्ने, तालतलैया संरक्षण क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, कल्भर्ट निर्माण गर्ने, चर्पी निर्माण गर्ने, पिकनिक खानका लागि कटेज निर्माण गर्ने तथा पर्यटक हिँड्ने गोरेटो बाटो निर्माण गरिदियो । बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै तालतलैया क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास हुन थाल्यो ।
२०६६ सालबाट व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको तालतलैया पर्यटन क्षेत्रमा सिजनको समयमा दैनिक पाँच हजारसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । विशेष गरी कात्तिकदेखि फागुनको दोस्रो सातासम्म यस ठाउँमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको समेत गन्तव्यस्थल बन्दै गएको तालतलैमा विषेश गरी पिकनिक खान खाने पर्यटकहरु बढी आउने गरेका छन् । यसैगरी जीवजन्तुको अवलोकन, जैविक विविधताको अवलोलनक तथा अनुसन्धानका लागि पर्यटक आउने गरेका छन् ।
तालतलैया आकर्षक गन्तव्यस्थल भएपनि सरसफाइमा विशेष चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । तालतलैया पर्यटकीय क्षेत्रमा सरसफाइ कम हुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटकहरु आएर लामो समयसम्म बस्ने सक्तैनन् ।
धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य पिण्डेश्वर-दन्तकाली पदमार्ग
झापाको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य गौरादह कृषि पर्यटन क्षेत्र